HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 8-DA JUUN 2019-KA
Saturday June 08, 2019 - 09:11:26 in Wararka by Mogadishu Times
WASIIRKA GAASHAANDHIGGA OO GAARAY BAYDHABO & U JEEDKA OO LA SHAACIYAY Magalada Baydhabo ee Xarunta Go bolka Baay waxaa Shalay gaaray wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaarad da Gaashaandhigga Xukuumadda Soo maaliya Xasan Cali Maxamed(
WASIIRKA GAASHAANDHIGGA OO GAARAY BAYDHABO & U JEEDKA OO LA SHAACIYAY Magalada Baydhabo ee Xarunta Go bolka Baay waxaa Shalay gaaray wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaarad da Gaashaandhigga Xukuumadda Soo maaliya Xasan Cali Maxamed( Amardambe) iyada oo halkaasi siweyn loogu soo dhawe eyay. Wasiirka ayaa waxaa uu kulan kula qa atay saraakiisha Ciidamada Xarunta tal iska qeybta 60aad ee Ciidamada xoo gga dalka Soomaaliyeed oo ku taalla Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobo lka Baay.
Taliyaha qeybta 60aad ee Ciidamada xoogga dalka Gaashaanle Sare Cabdir axmaan Maxamed Cusmaan (Timaca dde) ayaa sheegay in U jeedka Wasiirka uu u tegay Bay dhabo ay tahay in uu tab abar Maalinta berito ah uu u furi doono Ciidamo ka mid noqoanaya Millat eriga Soomaaliya.
Dhinaca kale Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Soom aaliya Xasan Cali Max amed( Amardam be) ayaa ka mahad celiyay soo dhawey nta loo sameeyay,waxana uu sheegay in tababarkaas ay ka faa’iideysan doo naan Boqolaal askari oo ka mid noqon doona Ciidamada Dowladda Soomaal iya.
Sidoo kale Wasiirka ayaa waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Ciidan kaas tababarkooda uu socon doono mudo laba Bilood ah,isla markaana loo gu talo galay inay ka qeyb qaataan daga alka ka dhanka ah AlShabaab ee ka so cda deegaanada Koonfur Galbeed.
Hoos Ka Dhageyso Codka Wasiirka Ga ashaandhigga iyo taliyaha qeybta 60aad ee Ciidanka xoogga dalka.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed( Amardambe).
Guddoomiyaha Gobolka Hiiran oo ba aq u diray Booliska AMISOM
Xilli daraad Magalada Baladweyne la ga dhagaxdhigay dhismaha Saldhig ay ku Shaqeyn doonaan Booliska HirShab eelle ayaa Guddoomiyaha Gobolka Hiir aan waxaa uu baaq u diray Sara akiisha Ciid amada Booliska AMISOM ee ku sugan Magalada Baladweyne. Guddoo miyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar( Dabageed) oo Warbaah inta la hadlay ayaa sheegay in saldhi gyada ay horay Baladweyne uga hirgeli yeen Booliska AMISOM uu uga mahad celina yo,hayeeshee uu ka dalbaday in Afarta xaafadood ee Magalada Baladwe yne ay saldhigyo kale ka dhisaan.
Waxaa uu sheegay in saraakiisha Bool iska AMISOM ee ku sugan Magal ada Baladweyne ay horay ugu direen codsi yo kala duwan,isla markaana ka maamul ahaan ay ka sugayaan inay ka helaan jawaab deg deg ah.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo eedeyn culus u jeediyay Madaxweyne Waare
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuu suf Axmed hagar Dabageed ayaa ku ee deeyay Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare in uu ku fashi lmay maamulida degaanada maamulka Hirshabe elle.
Waxaa uu sheegay in dhibaatooyin uu ka waddo gobolka hiiraan, islamarkaana maalin walba uu keeno Mid cusub si uu u aruursado dhaqaallihii loogu tala galay maamulka gobolka Hiiraan.
Waxaa uu sheegay in Madaxweyne Waare uusan Beledweyne keenin hal xabo Bastoolad, isla markaana ay taa gan tahay dhibaatooyinkii uu abuuray.
Qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ayaa horay Madaxweyne Waare ugu ee deeyay in uu si deg deg ah isbadel ugu sameeyo maamulka gobolka Hiiraan, islamarkaana taasi ay tahay dhibaato weyn.
QARAMADA MIDOOBAY OO SHAQAALA HEEDA KA QAADANEYSA DALKA SUUDAAN
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay qeyb ka mid ah shaqaalaheeda ka qaadaneyso Dalka Suu daan, markii ay halkaasi ka dhaceen rabshado iyo dilal al. Farhan Haq, oo u hadashay Jimciyad da Qur uumaha ka dhaxeysa ayaa intaa ku dartay in ay si ku meel gaar ah ugu sii howl geli doonaan Khartuum xubno muhiim u ah.
Dhinaca kale Midowga Afrika ayaa ka ku baaqay kulan degdeg ah oo lagaga xaajoonaya xaaladda sii murgey sa ee Dalka Suudaan, lamana sheegay goobta iyo xilliga la qabanayo.
Hoggaamiyeyaasha isbedel do onka Dalka Suudaan ayaa ku Gacan saydhay in ay wada hadallo la galaan Golaha Millateriga, markii ay ka caroode en in ka badan Boqol Qof oo lagu dilay Khartum, falk aas oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen Ciidamada.
OLOLE MOOSHIN AH OO LAGA WADO GUD DOOMIYE C/WELI MUUDDEEY
Saacaddihii ugu dambeeyay waxaa xoogeystay wararka sheegaya in Moo shin laga waddo Gudoo miye ku xigeen ka Koowaad ee Golaha Shacab ka Cab diwali Sheekh Ibraah im Muu dey.
Ololaha Mo oshinka ayaa wararku waxa ay sheegayaan inay waddaan xildhibaano ka tirsan Go laha Shacabka.
Ilo kalsoonaan karo ayaa Risaala u sheegay in guuxa Mooshinka uu soo bil ow day tan iyo markii Golaha Shacabka la horkeenay sharciga doorashooyinka.
Ololaha Mooshinkaan ayaa si xowli ah ku socda, waxaana la sheegay in aan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin meelm arintiisa, islamarkaana wali ay socdaan tashiyo ay waddaan xildhibaanada Olola ha Mooshinka wadda iyo Mas’uuliyiin daba ka riixaysa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Gudoomiye muudey uu kasoo horjeedo Sharciga Doorashooyinka oo hada horyaala Baarlamaanka.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ay aa haataan ku maqan dalka Turkiga, iya doo la rumeysan ya hay inuu xilligan awo od ku leeyahay Baarlamaanka, waxaa na la xusuustaa doorkii uu ku lahaa ridi stii Guddoomiye Jawaari.
WAR CUSUB OO KUSOO KORDHAY SARKA ALKII LA SHEEGAY IN UU IS DALDALAY
Xaaska Sarkaalkii shalayy la shee gay in uu isku daldalay Xerada Ciidama da ee xaafada Sheelare degmada Xam ar Jajab ee Gobolkan Banaadir,kaas oo ka tirsanaa Ciidamada Booliska Soo maaliyeed ayaa sheegtay in seeygeeda uu is daldalin balse la dilay.
Allaha u Naxa riistee Meydka Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Seed ay aa lagu arkay Guda ha Xera da Sheelare, isaga oo qorta uu u suran yahay xarig, isla markaana uu geeriyooday.
Xaaska Marxuumka oo lagu Magaca abo Deeqo Axmed ayaa beenisay war arka shee gaya in sarkaalka uu isbdi lay,hayeeshe ay sheegtay inay tuhme yso in si ula kac ah loo dilay.
Iyada oo Warbaahinta kula hadleysay gudaha Xerada ayaa waxaa ay shee gtay in madaxda ka sareysa ay kusoo wargeliyeen in la duminayo Hoyga ay de gan yihiin,,isla markaana ay ka guur aan,balse uu u sheegay in uusan garan eyn meel uu aado.
Waxaa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in uu soo wacay Sarkaal ay Ma gaciisa kusoo koobtay Su lub,kaas oo ay sheegtay in uu ku amray inay Guriga ka guuraan,balse shalayy meydka seygee dii lagu arkay Xerada Ciidamada ee Sheelare.XIGASHORADIORISAALA.COM
MADAXWEYNE XAAF OO DIB UGU LAABTAY DHUUSAMAREEB
Madaxweynaha oo safar shaqo mud ooyinkan dambe ku joogay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa ma anta soo gaaray Magaalada Dhuusa ma reeb ee Caasimada Galmudug.
Waxaa garoonka diyaaradaha ee Maga alada Dhuusamareeb kusoo dhaweeyay Madaxweynaha Mad axa xukuumada Galmudug Shiikh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo qaar ka mid ah Golihiisa wasi irada.
Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay wax yaabihii uga soo qabsoomay intii uu ku maqnaa safaradiisa dibada iyo gud ahaba waxa uuna sheegay in uu mudo uu ku sugna Magaalada Gaalkacyo hal kaasna uu joogay Arimo badan oo ay ka midyihiin sidii loo sii wadi lahaa Horum arinta amniga iyo nabada Gaalkacyo iyo in Galmudug isku tashato si loo helo isku tashi iyo isku filnaanshana dadku ay Canshu urta bixiyaan canshuunta la qaadana ay ku baxdo nidaam Dowla deed si ay hadhoow bulshadu uga faa’iideystaan.
ABIY AXMED OO DHEXDHEXAADIN KA BILAABAY DHINACYADA SUUDAAN`
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ah med ayaa shalay gaaray magaalada Khartoum ee caasimada dalka Sudan, si uu u dhexdhaxaadiyo madaxda militari ga dalkaas xukuma iyo hogaamiyayaa sha dib adbaxayaasha.
Abiy ayaa kasoo degay garoonka diyaar adaha caalamiga ah ee Khartoum wuxu una kulamo la leeyahay Jeneraalada xukunka haya.
Ra’iisul wasaraaha Itoobiya ayaa la filayaa in goor dambe oo shalay ah uu sidoo kale la kulmo xubnaha hoggaamin aya banaanbaxayaasha.
"Waxaan casuumad ka helnay safa aradda Itoobiya si aan halkaas ugula kulano ra’iisul wasaare Abiy Ahmed, wa ana tagi doonnaa” Waxaa sidaas yiri hoggaamiyaha dibadbaxayaasha Omar alDigeir oo la hadlay wakaaladda wararka AFP.
Ciidamada Sudan ayaa isniintii billaa bay howlgal ka dhan ah dibadbaxayaa sha fadhiya dibadda xarunta wasaarad da gaashaandhigga, waxaana ku dhin tay in ka badan 100 qof.Saraakiisha ay aa sheegay in tirada rasmiga ah ee dhi mashada ay tahay 61 qof.
Maxkamad ku taalla Magalada Nairobi ee Caasimadda dalka Kenya ayaa wa xaa Shalay la hork eenay Afar Ruux oo Soomaali ah oo uu ka mid yahay Aqoon yahan Ibraahim Burs aliid oo Arbacadii ay xireen Ciidamada Sirdoonka dalka Kenya.
Dadkaan ayaa Kenya waxaa ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin waxa dal alka Reer Galbeedka ugu yeeraan arga gaxisada,waxana Afarta ay kala yih iin,Maxamuud Maxam ed Bashiir,Cali Cabdi Maxamed, Xuseen Xasan Maxamuud iyo Ibraahim Qaasim Faarax oo loo yaq aan Bursaliid.
Garsooraha Maxkamada Milimani ee magaalada Nairobi garsoore Peter Okoo ayaa amray in Afart aan Ruux ee Soomaalida ah lagu sii haayo Xabsiga mudo Afar Cisho ah,iyada oo Maxkam adeyntooda ay dhici doonto 12ka Bishaan.
Wararka kale ee la helayo ayaa wax aa ay sheegayaan in Hoyga Aqoon yahan Ibraahim Qaasim Faarax (Burs aliid) laga helay Baasaboor jabuutiyaan ah warqadaha gudiga doorashada afar taleefan Cardka aqoonsiga qaxootiga ee loo yaqaan Alienka iyo Copyga laba Kibaandho oo Sharciga Kenya ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya weli kama hadlin tallaabadan ay ku dhaqaaq day Dowladda Kenya,iyada oo uu weli taagan yahay khilaafkii u dhaxeeyay labada dowladood ee salka ku haya mur anka dhinaca Badda ah.
SARKAAL MAXAMED NUUR OO LA XUKUMAY
arsoore ku sugan maxk amad ku taal magaalada Mi nneapolis ee gobolka Min isoto ee dalka ayaa xab si 12 sano iyo bar ah ku xuk umay Maxamed Nuur oo ahaa askari ka tirsan booliska Minnea polis.
Maxamed Nuur ayaa asal ahaan kasoo jeedda Soomaaliya, waxaana uu ka mid ahaa sar aakiishii booliska ee Soomaalida ahaa ee ugu horreyay ee ka mid noqdo Booliska Marey kanka.
Guddi xeerbeegti ah oo eegayay dac wad dil ah oo lagu soo oogay Maxamed Nuur ayaa ku helay laba danbi oo dil ah.
Mid ka mid ah dambiyada lagu helay ayaa ah dilka darajada heerka saddexaad, wax aase lagu waayey dilka darajada heerka labaad, oo ciqaabtiisa ka badnaan lahayd Midkaan.
Maxamed Nuur ayaa loo haystay dilka gabar caddaan ah oo lagu magacaabay Justine Damond, oo u dhalatay dalka Australia.
Nuur ayaa dilay Justine Ruszczyk Dam ond oo booliska wacday kadib markii ay baqdin dareentey 2017kii.
TOBANEEYO QOF OO LAGU DILAY WEERAR KA DHACAY NIGERIA
Ugu yaraan 16 qof ayaa la dilay, 14 kalena waa lagu dhaawacay weerar ka dhacay Degmadda Ka noma ee Gobalka Zamfara ee W/galbeed ee dalkaasi.
Afhayenka Guddoomiyaha Gobalkaasi, Yuusuf Idris ayaa sheegay in ay dabley hubeysan geysteen weerarkaasi, iyadoo dadka la dhawaacay lagu daaweynayo Xarunta Daaweynta Federalka ee Dee gaankaasi.
Mar sii horreysay, Guddoomiyaha Degmadda Kanoma, Yaxya Maxamed waxa uu sheegay inay ko ox burcad hu beysan soo weerareen Deegaanka, iya goo si aan kala sooc lahayn u furay rasa asta qy 16ka qof ku geeriyootay, 14kalena ku dhaawacmeen.
Gobalka Zamafara waxa uu ka mid yahay Goballadda ku yaalla Waqooyiga Nigeria oo ay ka dhaceen tirada ugu sar reysa ee weeraradda ay waxyeelladda ugu badan ka soo gaaraan haweenka iyo carruurta.
WASIIRKA MAALIYAD SOMALILAND OO SI KU MEELGAADH AH LOOGU DHIIBAY IN UU SII MAAMULO WASAARAD KALE IYO BUUQA KA DHASHAY
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi ayaa la sheegay in si ku meel ga adh ah wasiirka Maaliyadda ugu sii dhi bay wasaarada Qorsheynta qaranka oo wasiirkeedii xanuun awgi dibadda kaga maqan yahay.
Wasaarada Qorsheynta intii uu wasi irkeedii xanuunsanayey waxa ku sime ka ahaa wasiir ku xigeenka wasaarada Qorsheynta Eng. Xuseen Ibraahin Bu uni, haseyeeshee hadda ayaa la she egay in wasiirka Maaliyada Sacad Cali Shire si ku meel gaadh ah loogu sii dhi ibay wasaaradda, taasina waxay dhal isay murana ka dib markii odayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda wasiir ku xige enka deegaankiisa talaabadan ku tilma ameen mid lagu yasayo,isla markaana ay ku macneeyeen in aan loo ogolayn in mudada yar ee wasiirku ka maqan yah ay wasiir ka noqdaan Somaliland.
Odayaashan hadlay ayaa wasiir ku xigeenka ka dalbaday inuu is casilo mar hadii isaga shaqadii lagu aaminiyey waa yey.
Hadalkii haynta ugu badan ee maalm ahan waxay noqotay wasiirkaasi labada wasaaradood maamula ya iyo sababta ku xigeenkii wasaaradda loogu diiday in uu ku sime ka sii noqdo oo shaqadii wasiirka sii qabto.
Shacabka ayaa arrintan ku kala ar agti duwan, halka qaar ku doodayaan in ay iska caadi tahay in wasiir kale sii maa mulo wasaarada mar hadii uu wasiirkii xanuunsanayo, halka qaar kale ku doo day aan in aanay jirin in wasiir kale sii maamulo wasaarada mar hadii wasiir ku xigeenkii joogo oo uu shaqa dda uu sii qaban karo.
Illaa hada madaxweynaha iyo wasiir ku xigeenka wasaarada Qorsheyntu Bu uni kama hadalarrin tan.
FAAHFAAHIN KA SOO BAXAYSA DARAWAL MOOTO BAJAAJ OO DULEEDKA MUQDISHO LAGU DILAY
Nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa darawalada mootada saddexda lug leh ee Bajaajta ayaa galinkii dambe ee kha miistii daraad lagu dilay duleedka Muqdi sho, sida laga soo xigtay dadka deega anka.
Dilkan ayaa ka dhacay deegaanka Weydoow , waxaana la sheegay inuu ka dambeeyay askari ka tirsan ciidanka do wladda oo la socday gaari nooca dagaalka ah oo ay sarnaayeen ciidan ka tirsan kuwa dowladda.
"Mootada iyo gaariga ciidanka way is daba socdeen waxaan ka war helnay rasaasta dhacaysa." Ay uu yiri qof goo bjooge ah oo la hadlay warbaahinta gud aha.
Ciidammada uu la socday askariga dilka geystay ayaa ku sii jeedday deega anka Siinka Dhe er,waxaana toogashada ka dib ay goobta isaga dhaqaaqeen ciid ammadii dilka geystay, iyagoo aan wax gurmad ah u sameyn ninka ay dileen.
Ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Warsame, ayaa meydki isa waxaa xarunta baaris ta dambiya ee CID oo ku taalla Muqdisho garsiiyay ehe ladiisa, mana jirto warbixin ka soo ba xday laamaha ammaanka oo dilkan loo ga hadlay.
Dilalka darawalada mooto Bajaajta ayaa muddooyinkii dambe ku soo batay magaalada Muqdi sho,iyadoo inta badan ay geystaan ciidammo ka tirsan kuwa amniga ee dowladda.
TUUGO SOOMAALI AH OO GANACSADE SO OMAALIYEED KU DILAY K/AFRIKA
Boliska Dembibaarista ee maga alladda Port Elizabeth ee dalkaasi ayaa baadigoobaya Bu cad dil u geysatay Mu aadin Soom aali ah oo la oran jirey Aadan C/qa adir Jaamac oo 32jir ahaa. Kolonel Pris cilia Naidu oo ka tirsan Bol iska dalkaasi ayaa sheegay inuu Marx uumkaasi abaarihii 7dii fiidnimo ee hab eenkii Talaadada ee la soo dhaafay uu xiray Dukaankiisa, kadibna la toogtay isagoo hor taagan Du kaan kale oo ku yaalla Jidka Kerk Street ee Deegaanka Missionvale ee duleedka magaalladda Port Elizabeth.
Milkiilaha dukaanka kale oo Sooma ali ahaa waxa isagoo gudaha ku jira ma qlay rasaasta, kadib markii uu soo bax ay waxa uu arkay Marxuumka oo lagu dhuftay dhowr xabbadood, kuna dhacay Waddolugeedka.
Allaha U Naxariisto Marxuumka Aa dan C/qaadir Jaamac isagoo dhaawa can ayaa loola cararay Isbitaalka, balse wax yar kadib ayuu ku geeriyooday Isbit aalka. dhinaca kale, Boliska Koonfur Afri ka waxay sheegeen in Eedeysanaha dil ka geystay uu ahaa Burcad Soomaali ay Boliska yaqaanaan, kaasi oo ilaa iyo haatan baxsad ah.
Dhanka kale lama yaqaan magaca Gacan ku dhiiglaha, balse, Boliska wax ay ka codsadeen dadw eynaha inay Boli ska la soo xiriiraan haddii ay arkaan Ga cankudhiiglaha dilka geystay.
MADAX KA TIRSAN MAAMULKA SH/HOOSE IYO MAS’UULIYIIN KALE OO KORMEER KU TEGAY DEEGAANKA BARIIRE
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Ibraamin Aadan Cali Najax iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa kor meer ku tegay deegaano dhawaan Ciidanka Danab ay kala wareegeen Alshabaab.
Xildhibaano Siidow oo ka tirsan Baar lamaanka Soomaal iya, Wasiirka amniga Koonfur Galbeed,iyo xubno kale oo ka socday Maamulka Gobolka Shabeellaha ayaa ku wehlinayay kormeerka Guddo omiye Najax,isla markaana waxaa ay tageen deegaanka Bariire oo ah dee gaan Istiraatiiji ah,iyagoona ku gaaray safar dhanka dhulka ah.
Guddoomiye Ibraamin Aadan Cali Najax ayaa u mahad celi yay Ciidanka Xoogga dalka ee ku sugan deegaan ka,isla marka ana waxaa uu ku dhiirageli yay inay sidii wadaan howlgalada ka dhan ah Alshabaab ee ka socda dee gaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale Wafdiga ayaa ayaa u kuu rgalay xaalada ka jira deegaanka Bari ire,iyagoo indha indhayn ku sameeyay xaalada Caafimaad ee shacabka halka as ku dhaqan.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeell aha Ibraamin Aadan Cali Najax ayaa ka war bixiyay Socdaalkiisa waxaa uu she egay in Deegaanka Bariire haatan ay ka jirto xasilooni amni ah oo la isku haleyn karo lkn ay jiraan Baahiyo Caafimaad iyo mid Nololeyd oo ay qabaan Dadka Deegaankaasi, isagoo sheegay in ha atan ay wadaan Qorshe si deg deg ah Dad deegaankaasi loogu gaarsiin doono Gargaar kala duwan.
Ciidamada Xoogga dalka Soomaali yeed ayaa deegaanka Bariire dagaal u ga saaray dagaalamaya asha Alshaba ab oo halkaasi oo in muddo ah gacanta ku haayay,hayeeshee mararka qaarko od ayaa weeraro ay kusoo qaadaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid warbixin uu wargeska ka soo baxa Kenya uga hadlay deegaan nadii laga sahm iyay shid aal in ay dowl adda So omaaliya ku soo darsatay dee ga anno katirsan nya.
Wargeyska warkan qorey ee Sta ndard ayaa warbixintiisa ciiwaan uga dh igay 'Soomaaliya oo iibinaysa saliidda Lamu' iyadoo marka uu wargeyska shee gay inuu arkay Dukumiinti magaciisu yah ay 'Offshore Somalia 2019' oo laga soo da ayay Wasaaradda Macdanta iyo BatroolkaSoomaaliya oo muujinaya xirm ooyinsalii dda Lamu ah oo qayb ka ah kuwa ay dow ladda Soomaaliya usoo bandhigtay maal gashadayaasha.
Balse, wargeyska kuma uusan soo bandhigin warbixinta Dukumiintiga uu sheegay inuu arkay ee muujinaya dowla dda Soomaaliya inay dhul ay leedahay Kenya ku darsatay warbixintii sahanka ee loo soo bandhigay maalgashadayaasha.
Cabdulqaadir Abiikar oo ah lataliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Macdanta iyo BatroolkaSoomaaliya , ayaa u sheegay Hiiraan Online inaysan waxba ka jirin warka uu baahiyay wargeyska Standard ee uu ku sheegay xirmooyin saliidda Lamu inay dowladda Soomaaliya ku soo dartay sahankii la sameeyay.
"Waxaan caddeynaya inaysan jirin goob ka tirsan Kenya oo ay dowladda Soom aaliya ku soo dartay warbixintii la xiriirtay sahanka shidaalka." ayuu yiri Cabdul qaadir Abiikar oo wareysi gaar ah siiyay Hiiraan Online.
Abiikar , ayaa inta ku daray inuu sahanka ku ekaa xeebaha koonfurta ku yaalla illaa bartamaha oo ku eg deegaannada Gal mudug, isagoo marka ka digay in bul shada lagu marin habaabiyo warbixinno sida uu sheegay 'been abuur ah'.
Sheegashada Kenya ee ku aaddan dowladda Soomaaliya inay warbixinteeda sahanka ku soo darsatay dhul ay lee dahay Kenya, waxaa horey u beenisay Spectrum oo ah shirkaddii sameysay sahanka shid aalka Soomaaliya , waxaa kalo ay marka caddeysay shirkadda inay san wax baaritaan ah ka sameyn aagga hadda kiiskiisu yaallo maxkamadda dambi yada caalamiga ah.
ADDUUNKA OO KU BARAARUGAY FAA'IDADA CAAFIMAAD EE GEELA U LEEYAHAY "RAGANIMADA"
Caanaha Geela ayaa la sheegay inay kamid yihiin cuntooyinka ugu nafaqada badan ee ka qeyb qa adanaya sare u qaa didda caafimaadka. Waxaa caanaha Ge ela ku jiraa maddooyin dhowr ah oo isugu jiro kuwo ka qeybqaadanaya jir dhiska iyo Fitamiinno kale. Warbixin ay qortay barta QZ.com ayaa lagu sheegay in 12.2 milyan oo neef oo Geel ah ay ku nool yihiin Bariga Afrika, waana meesha ugu badan ee Geela laga dhaqdo.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in caanaha Geela ay dawo u yihiin cudu rrada Sokorta, Alarjiga iyo waxay sare u qaadeysaa shahwada ama awoo dda ragga.
Barta Qz ayaa sidoo kale sheegtay in dalal Afrikaan ah sida Mauritania, Masar iyo Chad ay si weyn u isticmaalaan caana ha Geela ee gudaha dalalkaasi laga soo saaro intii ay ku tiirsanaan lahaayeen caa naha dibadda uga yimaado.
Caadiyan Geela waxa uu magac iyo muu no gaar ah ku dhex leeyahay bulsha da Soomaalida oo xooluhu yihiin lafdhabarta nolashooda.
Nin Soomaali oo celiyay geel uu dhacay 33 sanno ka hor
Nin sida dadka oo kale aas sharfan u sameeyay hal ka dhimatay
"Xal loo helay dhibaatada abaaraha deeg aannada Soomaalida"
Shirkadda Wajir milk Traders ayaa ku guul aysatay in caanaha ay u dhoofiyaan gob olka Scotland, taasi oo ah wax ku cusub gobolka Waqooyi bari Kenya oo inta bad an caanahooda lagu iibiyo gudaha dalka.
Qaxwo lagu caddeeyay caano geel laga dhoofiyay Wajeer ayaa haatan laga heli karaa Scotland
Faaduma Cusmaan Axmed waa mulkiil aha shirkada caanaha u dhoofisa Scot land, waxayna ka warbixisay sida ay arr intan ugu suuragashay.
" Waxaa na soo booqday hay'ado kala duwan, waxay naga aruuriyeen warbix inno iyo xog kuwaas oo ku shaaciyey we bsiteyada, halkaas ayaana macaamiisha ka helnay." Ayey tiri Faadumo
" Halkan aan joogna ayaa lagu habeeya marka hore kaddib anaga oo raacayna sharciga ka jira dalka ayaa waxa qaata macaamiisha".
Glasgow cafe ee gobolka Scotland ee Britain ayaa haatan lagu iibiyaa qaxwo lagu caddeeyay caanaha geela, iyadoo bo qolkiiba 10 dhaqaalahaasi la siinayo Faa dumo iyo dumarka kale ee la shaqeeya.
Mashruucan waxaa iska kaashan aya maqaayadaha shaha iyo qaxwada ee Galsgow iyo hay'adda Mercy Corps. AlShabaab oo lagu eedeeyay inay kumannaan geel ah qaadeen Soomaal ida ku nool geeska Afrika aya si weyn u ist icmaala caanaha geela, iya daao takh aatiirtu iyo saynisyahannada ay sheegeen inay leeyihiin faa'idooyin caaf imaad oo weyn.
Faadumo Cusmaan Axmed, oo ka mid ah haweenka caanaha geela u dhoofiya Scotland
"Caanaha geela waxay daaweeyaan cu durro badan sida xanuunada kansarka, sonkorta iyo dhiig karka, sidoo kale caan aha geela ma halaabayaan haddii ay mud do yaalan, waxaana laga helaa faa'idooyin badan oo aanan laga helin xoolaha kale, fa'iidooyinka gaarka ah ee aan aniga ka helay iibinta ama suuq gaynta caanaha ayaa ah inaan hadda hormar ku tilaa bsannay oo aanan joogin meeshii aan ka bilaawnay, horaan baannaanka ayaan ku iibin jirnay balse hadda waxaan ku howl galnaa xarun iyada oo ay hay'ad noo bala nqaaday inay noo dhisto xarun weyn," ayay tiri Faadumo Cismaan oo u warr amaysay laanta af Soomaaliga ee BBC.
"Waxa la rabaa in wax soo saarkaada aad u samaysid ama aad ka fikirtid sidii aad suuqyada kale ee caalamka aad u gayn lahad, dhibaatooyin badan ayaa ka hor yimaada maadama aysan badanaa dadkan haysan taageero dhanka dowladda ah taasi oo niyad jab ku ah, balse haddii la raaco sharciyada waxa an aaminsanahay in wax soosaarka la gayn karo suuqayada kale ee Caalamka," ayay raacisay hadalkeeda Faadumo.
Degaanka Wajeer waxaa ku nool ku dhawaad 600,000 oo neef ooo geel ah, sida ku cad tirakoobkii Kenya laga same eyay sanadkii 2009ka, suuqgeeynta caa naha geelana waxaa uu war wanaagsan dadka dhaqda geela iyo kuwa ka gan acsada caanahiisa.Xigasho: BBC
GUDOOMIYE KUXIGEEN XALAY LAGU DILAY JOWHAR
Wararka naga gaaraya magaalada Jow har ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in Ko oxo hubey san ay tooga sho ku dileen Gudoomiye kuxigeenkii degaanka Ga mboole.
Ninka la dilay ayaa lagu Magacaabi jiray Cabdirashiid Xaaji Maxa med.
Dilka ayaa dhacay Salaadii maqrib ka dib sidda ay Risaala u xaqiijiyeen masuuliyiin ka tirsan Hirsha beelle.
Kooxihi dilka geystay ayaa goobta ka bax saday, waxaana halkaasi gaaray Ciidanka dowlad da Soom aaliya ee booliska, isla markaana waxa ay bilaabeen baaritaano.
BARCELONA OO SI LAMA FILAAN AH WADAHADALO ULA FURTAY MAN UNITED OO AY KA DOONAYSO MARCUS RASHFORD & SIRTA KA DAMBAYSA OO LA OGAADAY
Kooxda Barcelona ayaa si lama filaan ah wadahadalo ula fur tay kooxda Man United ay kaga doo nayso saxiixa xiddiga weer arka uga ciyaara ee Marcus Rashord sida ay sheegayaan war ar ku.Barcelona ayaa doonaysa weeraryahan cusub in ay ku soo darto kooxdeeda inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan si uu ula tartamo xiddiga Luis Suarez badalna ugu noqdo mustaq balka.
Wargayska Sport ee ka soo baxa Barcelona ayaa sheegaya inay kooxda ku guulaystay horyaalka La Liga la xidhiidhay maa mulka kooxda Barcelona si ay ugala hadlaan saxiixa da,yarka reer England.
Sirta ka dambaysa rabitaanka Barcelona ee Da,yarka ayaa ah inuu awood u leeyahay in uu ka ciya aro saddexda boos ee weerarka sida garabaha iyo weerarka tooska ah oo uu uga ciya ara kooxdiisa Man United iyo xulka qarankiisaba
Heshiiska Rashford ayaa dhici doona xagaaga 2020 ilaa haa tana heshiis cusub umuu saxiixin koo xda Man United kadib mar kii ay ka hadhay champions League xilli ciyaareedkan.
Wargayska ayaa sii raaciyay in ay Man United da,yarka ku qiimayso lacag ku dhaw 100 milyan oo euro laakiin ay Barcel ona lacag intaas ka yar ku heli karto hadii ay dhab ka tahay doonistiisu.
REAL MADRID OO HAATANBA IIBINAYSA MAALIYADA EDEN HAZARD, NO.7 AYUU XIDHAN DOONAA.
Inkasta oo aan wali heshiiskiisa Si Rasmi ah loogu dhawaaqin haddana kooxda Real Madrid aya haa tanba bilowday iibinta ma aliyada xiddiga reer Belguim ee Eden Hazard sida lagu arkay Store-da maali yada kooxda Real Madrid.
Maaliyada uu Magaca xiddiga reer Belguim ku qoran yahay ayaa ah No.7 oo uu Baneeyay xiddiga Cristiano Ronaldo haat ana xidho xiddiga reer Spain ee Mariano Diaz.
Maaliyada Hazard ayaa lagu iibinayaa lacag dhan 147.95 euros xilli ay taageerayaasha los Blancos haatanba iibsanayaan maaliyada Real ee xilli ciyaareedka dambe oo isla shalay la soo bandhigay. Sawirka maaliyada ayaa lagu arkay baraha bulsh ada gaar ahaan Twitter-ka kadib markii ay koox da Real Madrid isla shalay si Rasmi ah u soo bandhigtay maaliyada xilli ci yaareedka dambe. Wararka ayaa sheegaya in ay kooxaha Re al Madrid iyo Chelsea ka heshiiyeen saxiixa xiddiga reer Belg uim iya da oo la sheegaya in uu ku kacayo lacag dhan 130 Mil yan oo euro.
WAA KUMA DANIEL JAMES? WAX WALBA OO AAD UGA BAAHAN TAHAY SAXIIXA CUSUB EE MAN UNITED.
Kooxda Man United ayaa si Rasmi ah u xaqiijisay in ay dha maystirtay saxiixa xiddiga Daniel James kadib markii ay kooxda Swansea City kala heshiisay saxiixa xiddiga sidoo kale xiddiga wakhti hore la ga adhay heshiiska shaqsiga ah.
Man United ayaa sidoo kale xaqiijisay in uu xiddiga da,yarka ah ku baasay tijaabada caafimaadka warbixinta oo buuxdana soo saari doonto todobaadka dambe marka uu suuqa kala iibs igu si Rasmi ah u furmo.
Daniel Owen James waa xiddig reer Wales ah oo dhashay 10 bishii November 1997 isaga oo gar abka uga ciyaara kooxda Championship-ka ee Swansea City iyo xulka qaranka Wales haa tana noqday xiddig Man United Ah.
Daniel James ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda 1-aad saftay bishii February 2018 waxana uu kulankii ugu horeeyay ee xulkiisa Wales ee xulka 1-aad u saftay November 2018 kadib ma rkii uu dalki isa u soo matalay heerarka kala duwan. James ayaa goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay xulka Wales kulan ay la ciya arayeen xulka Slovakia 24 March 2019 kulan ka tirsanaa is reeb-reebka UEFA Euro 2020 markaas oo ay Wales ku abdisay 1/0. Xirfadiisa Kooxda?
Swansea City Da,yarka oo aad loo qiimeeyo ayaa ka soo baxay Akademiya kooxda Hull City, Wax ana uu James Swansea City ku biiray xagaagii 2014 isaga oo ugu biiray lacag dhan 72 kun oo Gini wax ana uu si deg-deg ah uga mid noqday kooxda Swansea ee U18 xilli ciyaareedkii 2016/2017, James ay aa xiddig muhiim ah ka noqday kooxda Swansea ee U23 kuwaas oo u soo dalacay heerka PDL Division 1 iyaga oo horyaalkood ku qaaday 11 dhibcood. Waxa intaas sii dheer in uu James ka qayb qaa tay door muhiim ahna ka ciyaaray ku guulaysigii koobka Premier League ee heerka Akadeiga halka uu kooxdiisa sidoo kale ka caawiyay in ay gaadho Premier League International cup ee isla heerkaas si la mid ah kooxdiisa geeyay quarter final-ka tartanka EFL Trophy.
39 June 2017 James ayaa amaah ugu biiray kooxda Legaue one ee Shrewsbury Town iyada oo amaahdaas la Kansalay 31 August 2017 kadib markii uu ku fashilmay in uu ka mid noqdo kooxda 1-aad.6 bishii February 2018, Xiddiga ayaa kooxda 1-aad ee Swansea City u saftay kulankiisii ugu hor eeyay isaga oo badal wakhti dambe ah ku soo galay kadib gool dhaliyay daqiiq adii 82-aad kulan ay Swansea 8/1 kaga badisay kooxda Notts County.
Waxa uu kulankiisii ugu horeeyay ee horyaalka championsh ip-ka u saftay Swansea 17 August 2018 kulan ay Kooxdiisu bar-baro la gashay kooxda Birmingham City.
Waxa uu goolkiisii ugu horeeyay ee horyaalka dhaliyay 24 November 2018 kulan ay kooxdiisu guul daro 4/1 ah kala kulantay kooxda Norwich City.
6 June 2019 james ayaa tijaabada caafimaadka u maray Man United xilli ay kooxda Man United ugu dambayn ku dhawaaqday in ay Swansea City kala heshiisay saxiixa xiddiga reer Wales.
Xirfadiisa Heerka Caalami
Da,yarka ayaa ku dhashay Yorkshire, England xilli uu James u doortay in uu u ciyaaro xulka England sabab la xidhiidha aabihiis oo ahaa Wales laguna magacaabo Kavan kaas oo ku dhashay Aberdare.
James ayaa gool ka dhaliyay Toulon Tournament isaga oo u ciyaaraya xulka Wales ee da,doodu tahay U20 markaas uu xul ka Wales kaga badiyay 1/0 xulka Bahrain kadib markii uu rikood he helay.
James ayaa xulka 1-aad ee wales looga yeedhay is reeb-ree bkii koobkii adduunka ee FIFA 2018 markaas oo ay la ciyaaray een xulka Serbia kulan dhacay 2017 waxana uu haatan si joogto ah uga soo muuqdaa xulka qaranka Wales oo uu tababare u ya hay Ryan Giggs.
RASMI: TAARIIKHDA & WAQTIGA RASMIGA AH EE LA CIYAARI DOONO KULANKA LIVERPOOL VS MAN CITY
Waxaa si rasmi ah loo shaaciyay taariikhda iyo waqtiga ra smiga ah ee la ci yaari doono kulanka finalka Community Shield ee dhex mari doona koo xaha Li verpool iyo Manchester City.
Xili ciyareed kasta bilawgiisa waxaa lagu fu raa kulanka finalka Community Shield oo ay wada ciyaaraan kooxaha ku guulaysta koobka Premier League iyo FA Cupka ama ko oxda kaalinta labaad ka gasha Premier League. Manchester City ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ku soo guulaystay koobka Premier league waxayna xili ciyaareed kii dhamaaday ku soo darsatay FA Cupka taas oo sabab u noqotay in Liverpool oo kaalinta labaad ku dhamaysatay ay City kula tart ami doonto Community Shield.
Liverpool oo kaalinta labaad kaga dhamaysatay Premier League ayaa xaq u yeelatay in ay ka soo muu ato finalka Community Shi eld maadaama oo ay Man City noqotay kooxda wada hanatay labada koob ee Premier League iyo FA Cupka ee ay kooxaha ku guulaystaa koobkan wada ciyaari lahaayeen.
In kulanka Community Shield ay wada ciyaari doonaan Jurg en Klopp iyo Pep Guardiola waxa uu sii hurin doonaa xifiltanka cusub ee Man City iyo Liverpool u soo socday xili ciyaareedkii soo dhamaaday. Kulanka finalka Community Shield ee kooxaha Liverpool iyo Man City waxaa la ciyaari doonaa maalinta axada, August 4 , 2019 marka ay saacadu tahay 3:00pm BST.
Waxaana finalka Community Shield lagu ogaadaa awooda koox aha loo saadaaliyo koobka Premier League ee xili ciyaareedka cusub waana goob uu ka bilaami doono dagaalka Man City iyo
Liverpool ee 2019/2020